भरतपुर अपडेट : एकाविहानै आयो यस्तो खबर !
ARCHIVE, POLITICS » भरतपुर अपडेट : एकाविहानै आयो यस्तो खबर !
भरतपुर महानगरपालिका– १९ मा पुनःनिर्वाचन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै यहाँका राजनीतिक दल फरक/फरक शैलीमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले मतपत्र च्यातिएकाले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि पुनः निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
आदेश जारी भएपनि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र पुनः मतदान हुने भन्दै घरदैलो अभियान र चुनावी सभामा जुटेका छन् । नेकपा एमालेले भने मतपत्र च्यात्ने विरुद्धमा जनचेतना अभियान भन्दै घरदैलो गरिरहेको छ । सो वडाका चार स्थानमा काँग्रेस र माओवादीले संयुक्त सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । सो वडाका माओवादीका वडाध्यक्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारले नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न थालेका छन् ।
जसमध्ये वडा नं– १९ को मतगणना हुदै गर्दा मतपत्र च्यातिएको हो । यो सहित वडा नं–२० को मात्र मतगणना गर्न बाँकी छ । दुई वडाको मतगणना गर्न बाँकी रहँदा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार दाहाल भन्दा ७८४ मतले अगाडि थिए । वडा नंम्बर १९ मा एक हजार ८०० मत गन्दा यो मतान्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो ।